Nei Vako Vemakambani Vhidhiyo Vachishaya Iyo Maka, Uye Zvekuita Nezvo | Martech Zone
Isu tese tinoziva zvinoreva mumwe munhu kana achiti "vhidhiyo yemubatanidzwa." Mukufunga, izwi iri rinoshanda kune chero vhidhiyo inogadzirwa nekambani. Yaimbove yakasarudzika tsananguro, asi haichisiri. Mazuva ano, vazhinji vedu muB2B kushambadzira vanoti vhidhiyo yemakambani nekamwe kekuseka.
Imhaka yekuti vhidhiyo yemubatanidzwa ndeye bland Vhidhiyo yemubatanidzwa inoumbwa nesitoko maficha evanoshanda navo vakanyanya kukwezva vaidyidzana muimba yemusangano. Corporate vhidhiyo inoratidzira ziya rakadikitira CEO kuverenga bullet kunongedzera kubva kune teleprompter. Corporate vhidhiyo chiitiko chinodzokororwa icho chinotanga nevanhu kuwana mazita avo bheji patafura uye rinopera nevanoombera maoko vateereri.
Muchidimbu, vhidhiyo yemubatanidzwa inofinha, haina basa, uye kutambisa bhajeti rako rekushambadzira.
Makambani haana kufa kuti arambe achigadzira chepamusoro mavhidhiyo. Semushambadzi, unogona kusarudza kuita mavhidhiyo ari kuita, anoshanda, uye anounza mhedzisiro.
Pane matanho matatu akakosha ekutevera kuti utange rwendo rwako kubva vhidhiyo yemakambani uye kupinda inoshanda vhidhiyo kushambadzira:
Chengetedza mari mukugadzira.
Vimba nevateereri vako.
Nhanho 1: Tanga neRuzivo
Most chepamusoro kuronga vhidhiyo kunotanga nemazwi mana akareruka: Tinoda vhidhiyo. Iyo purojekiti inotanga nechikwata chakatofunga kuti vhidhiyo ndizvo zvinodiwa uye kuti rinotevera danho kugadzira chinhu.
Nehurombo, kusvetuka wakananga mukugadzirwa kwevhidhiyo kusvetuka matanho akakosha. Mavhidhiyo emakambani anozvarwa kunze kwekushayikwa kweyakajeka, yakatsaurwa vhidhiyo zano. Chikwata chako chekushambadzira hachizosvetukira mupuratifomu nyowani yemagariro kana chiitiko chekutsigira pasina zano uye zvinangwa zvakajeka, saka nei vhidhiyo iri yakasiyana?
Semuenzaniso: Umault - Yakabatwa muVhidhiyo yeVhidhiyo
Usati wadhiraina mukugadzira vhidhiyo, tora nguva yako ushande kuburikidza nezano revhidhiyo. Pane zvirinani, ita shuwa kuti iwe unogona kupindura inotevera mibvunzo:
Chii chiri chinangwa cheiyi vhidhiyo? Inokodzera kupi murwendo rwevatengi vako? Imwe yemakanganiso makuru anotungamira ku chepamusoro vhidhiyo haisi kujekesa kuti vhidhiyo yacho inowira kupi mune yekutengesa fanera. Vhidhiyo inoshanda akasiyana mabasa pamatanho akasiyana erwendo rwevatengi. Vhidhiyo yekutanga-danho inoda kukurudzira vateereri kuti varambe vachiita neako brand. Vhidhiyo yekupedzisira-danho inoda kuvimbisa mutengi kuti vari kuita sarudzo kwayo. Kuedza kubatanidza maviri anotungamira kune a zvisina kufanira mess.
Ndivanaani vateereri vevhidhiyo iyi? Kana uine akawanda buyer personas, edza kusarudza imwe chete kuti usvike nevhidhiyo imwe chete. Kuedza kutaura kune wese munhu kunosiya iwe uchitaura kune chero munhu. Unogona kugara uchigadzira mavhidhiyo akati wandei kuti utaure nevateereri vakasiyana.
Vhidhiyo iyi ichashandiswa kupi? Icho chiri kusimudzira peji rekumhara, kutumirwa mumaemail anotonhora, kuvhura misangano yekutengesa? Vhidhiyo ndeyekudyara kukuru, uye zvinonzwisisika kuti vatori vechikamu vanoda kukwanisa kuishandisa mune akawanda mamiriro sezvinobvira. Nekudaro, vhidhiyo inoda kutaura uye kuita zvakasiyana zvinhu zvinoenderana neiyo chinyorwa inozo shandiswa mukati. Vhidhiyo pasocial media inoda kuve ipfupi, yakanangana, uye isvike padanho rekubata vateereri kuti vamise mupumburu. Vhidhiyo rekumhara peji rakakomberedzwa nekopi ichipa zvese izvo zvingatariswe netarisiro.
Funga kugadzira akawanda mavhidhiyo evhidhiyo yekushandisa kwakasiyana. Mutyairi mukuru wemutengo mukugadzira vhidhiyo izuva rekugadzira (ma). Yakawedzerwa nguva yakashandiswa kugadzirisa imwe vhezheni kana yakatemwa yakatemwa inzira isingadhuri yekuwana imwe mileage kubva panzvimbo yako.
Kutora iyo nguva kujekesa zano rako, kungave nechikwata chako kana neako agency, kunojekesa izvo vhidhiyo inoda kutaura nekuita. Izvo zvoga zvinotora nhanho hombe kubva mudunhu "remubatanidzwa", nekuti iwe uchave nechokwadi chekuti vhidhiyo ine yakajeka meseji, tarisa vateereri, uye chinangwa.
Nhanho 2: Invest In Kugadzira
Most chepamusoro mavhidhiyo anodzokorodza iwo mamwe akaneta matopi kazhinji uye zvakare. Mavhidhiyo mangani awakaona anotanga nezuva richisimuka pamusoro pePasi, wozo zoom munzira inopindirana ine node dzakatarisana nevanofamba netsoka, zvichiratidza Connectivity? Hongu. Aya mavhidhiyo ari nyore kugadzira uye nyore kutengesa kumusoro kwekutora sarudzo, nekuti unogona kunongedzera kumiriyoni yemienzaniso yadzo. Vako vese vakwikwidzi vazviita.
Uye ndizvozvo chaizvo nei vasingashandi. Kana vese vaunokwikwidza vaine vhidhiyo nenzira yakafanana, ungatarisira sei tarisiro yekurangarira kuti ndeipi yako? Aya mavhidhiyo anokanganikwa pakarepo mushure mekuonekwa. Tarisiro dziri kuita kushingairira kwavo uye vachitsvaga iwe nevako vese vaunokwikwidza. Izvi zvinoreva kutarisa vhidhiyo yako mushure memakwikwi ako. Iwe unofanirwa kugadzira vhidhiyo inoita kuti tarisiro irangarire iwe.
Kana iwe waita rako rechikoro uye wagadzira yakazara vhidhiyo zano, iwe unogona kunge uchitova neruzivo rwenzira yekubata yekuendesa meseji yako. Chinhu chikuru nezve zano revhidhiyo ndechekuti iro inobvisa sarudzo dzekugadzira kubva mukukakavara. Semuenzaniso, kana iwe uchinge waziva iwe kuti unoda kuita Sarudzo-nhanho vhidhiyo yeCIOs kumabhizinesi-chikamu chemakambani, unogona kuronga kuita vhidhiyo yeuchapupu kuti uve nechokwadi chekuti vari mukambani yakanaka. Iwe unogona kubvisa chero marongero ekugadzira chigadzirwa chekufamba kuburikidza nevhidhiyo inokurudzira. Iwo mavhidhiyo aigona kushanda zvakanyanya pakutanga murwendo rwevatengi.
Semuenzaniso: Deloitte - Iyo Command Center
Pfungwa yekugadzira haifanirwe kunge iri yekupenga kwaChristopher Nolan. Izvo iwe zvaunoda kuita kutsvaga nzira yekutaura zvakananga kune vateereri vako nenzira inobata uye isingakanganwike.
Kuisa mari mukugadzira kunopfuura kungoita zano revhidhiyo. Iyo yakasimba B2B yekushambadzira vhidhiyo inoda inobata script uye yakajeka chiratidzo yakatarwa kuburikidza nemabhaidhi enhau nyaya isati yatanga kugadzirwa Vhidhiyo "yemubatanidzwa" inowanzo a) isina kunyorwa kana b) rondedzero yemapoinzi ekutaura akateedzerwa uye akaiswa mune fomati yechinyorwa.
Mavhidhiyo asina kunyorwa anogona kuva nesimba, zvichienderana nenyaya yaunoda kutaura. Inoshanda kwazvo kune hwupupuri kana nyaya yemanzwiro. Isina kunyorwa haina kunaka kwazvo pakuburitswa kwechigadzirwa kana nzvimbo yechiratidzo. Kana pfungwa yevhidhiyo iri bvunzurudza CEO, ipapo iwe urikutsvaga yekugadzira kune iyo CEO uye vhidhiyo mupepeti uyo anoda kuibatanidza pamwechete kuita chimwe chinhu chakabatana. Izvo zvinowanzo kutungamira kune refu post-yekugadzira nguva uye dzakarasikirwa makiyi mapoinzi.
Munyori akanaka anogona kuita zvishamiso zvekududzira ako ekutaura muvideo fomati. Vhidhiyo script kunyora ihwo hunyanzvi hunyanzvi husina vese vanyori vekuteedzera. Vazhinji vanyori vanyori, nedudziro, vakanakisa pakuratidzira zvemukati mukunyora. Izvo hazvisi chaizvo zvakakosha pakuratidzira zvemukati mune odhiyo / yekuona yepakati. Kunyangwe iwe uine-mumba vanyori vanyori pane yako timu yekutengesa, funga kuendesa nyanzvi script script yemavhidhiyo ako.
Nhanho 3: Vimba Vateereri Vako.
Ini ndarasikirwa kuverenga kwehuwandu hwenguva dzatakanzwa vhezheni ye:
Tiri kutengesa kumaCIO. Tinofanira kuva chaiwo kana kuti havazouwani.
Pamusoroi? Uri kureva kuti maCIO emakambani makuru anoda zvese zvakanyorerwa ivo? Tevere, iwe uchazotaura kuti vanhu havadi mapuzzle kana zvakavanzika zvinyorwa.
Kuvimba nevateereri vako zvinoreva kutenda kuti ivo vakangwara. Kuti ivo vakanaka pamabasa avo. Kuti ivo vanoda kutarisa zvemukati zvinovavaraidza. Vateereri vanoziva kuti ndeyekutengesa. Asi kana iwe uchifanira kutarisa kushambadza, haufarire inonakidza GEICO nzvimbo kune yakaoma nzvimbo yekutengesa mota kushambadzira?
Kana vateereri vako vakabatikana (uye ndiani asiri wavo), vape chikonzero chekupedza nguva vachiona vhidhiyo yako. Kana ikango rehashes iwo mabara mabara kubva kune rako rekutengesa pepa, ipapo ivo vanogona kuenzanisa izvo panzvimbo. Vhidhiyo yakasimba inopa vaoni chikonzero chekushandisa 90 masekondi ezuva ravo pairi.
Vhidhiyo yakasimba ndeye inobata vateereri vako, inoita kuti vafunge, uye ichivaunzira imwe kukosha. Inopa chimwe chinhu chisingatorerwe kubva papepa rekutengesa kana infographic. Mavhidhiyo ako eB2B haafanire kukwanisa kutsiviwa nePowerPoint.
Semuenzaniso: Nuance - Isu, Vatengi
Corporate vhidhiyo yakakura ichibva nenzvimbo yakanaka. Sezvo vhidhiyo yakawedzera kuwanika senge svikiro, makambani aida kusvetukira pane zvinoitika. Iye zvino vhidhiyo iyi chinhu chinodiwa pakushambadzira kwemazuva ano, ita shuwa kuti urikugadzira mavhidhiyo anokura kutengesa uye anounza yakakosha ROI. Corporate vhidhiyo haizokuwane iwe ipapo. Vhidhiyo ine zano rakajeka, rakajeka rekugadzira, uye iro rinovimba vateereri varo vangangodaro.
Dhawunirodha yedu izere gwara kune mamwe matipi ekupunyuka yemubatanidzwa vhidhiyo musungo:
Nzira 7 dzeKudzivisa Kugadzira Vhidhiyo Yemubatanidzwa
Tags: vhidhiyo bhizinesivhidhiyo yemakambaniyemakambani vhidhiyo kushambadziradeloittebvuteumaultvhidhiyo kushambadziramavhidhiyo ekutengesa nziravhidhiyo kushambadzira zanovhidhiyo zanomavhidhiyo ebhizinesi